Archive du 20200106
Rina Randriamasinoro “Tsy matahotra hosamborina izahay”
Hita ho miha mahazo olona ny hetsika fitakiana ny fahamarinana eny amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka
Rado Ramparaoelina “Efa nipetrapetraka ny fanelingelenana tao anaty fifidianana.”
Notorian’ny kandida ho ben’ny tanana natolotry ny vovonana politika, IRK, nifaninana taminy tao Ampitatafika koa ny kandida natolotry ny antoko politika Tiako I Madagasikara, Rado Ramparaoelina.
Livasoa Randriatahiana - Betafo “Lainga foronina ireo fiampangana ahy.”
Nizara vola tao anaty fifidianana, nanao fandrahonana, nanao fihantsiana sy fanaratsiana maro toy izany no noforonin’ireo mpitory ny tenako hiapangana ahy, hoy ny kandida natolotry ny antoko politika Tia Tanindrazana,
Fidel Razara Pierre “Mbola hivadika vato ny atody”
Nampitandrina ireomiziriziry tsy hamoaka ny marina momba ny fifidianana ben’ny tanàna ny depiote Fidel Razara Pierre ny sabotsy teo raha nandray fitenenana teny amin’ny Magro
Reraka ny tanànan’Antsirabe Miandrandra fanovana tanteraka
Mikororosy andro aman’alina ny tanànan’Antsirabe ankehitriny raha tombanana ankapobeny eo amin’ny zava-misy ao aminy taratry ny vahiny sendra mandalo ao aminy.
Ben’ny tanàna voafidy tao Mahitsy Ampangaina ho nanodinkodina masera hifidy in-droa
Mihoampampana ny fitoriana tonga etsy amin’ny tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana etsy Anosy. B
Adin’ny Amerikanina sy Iranianina Homba an’iza i Madagasikara?
Isan’ny niteraka resabe teto amin’ny firenena tamin’ny taon-dasa ny nanaovan’ny filoham-pirenena Malagasy, Andry Rajoelina,
Fiangonana FM FOI Mila an’Andriamanitra ny tokantrano Malagasy
Toy ny fanaony isan-taona dia tsy namela mora foana ny andro Sabotsy fiandohan’ny taona ny fiangonana FM FOI, tarihin’ny Apostoly Benjamina. Fotoam-pivavahana lehibe izay
Hetsika Grand Defi de Kick Boxing Nangotraka tokoa ireo ady niisa 40 natrehana omaly
Tontosa, omaly alahady 05 janoary tetsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ny hetsika “Grand défi de Kick Boxing” nokarakarain’ny klioba CKBA (Me Eric Nonoh)
Ho enjana ny fandidiana
Fa maninona no kandida akaiky ny fitondrana, mba tsy hilazana hoe tohanany mihitsy, no tena ankamaroan’ireo nametraka fitarainana sy fitoriana,
Disadisa eo amin’ny Etazonia sy Iran Tsy maintsy hisy akony amin’ny fanjifana solika
Nody avokoa ireo mpiasa amerikanina miasa amin’ny kaompania amin’ny fitrandrahana solika tany Irak taorian’ny fanambarana natao’ny Iraniana ny amin’ny tsy maintsy hamaliana faty an’i Etazonia.
Jiro manjelatra eraky ny tanàna Mampiala voly no sady manampy amin’ny fandriampahalemana
Mbola hita manerana ny faritra maro eto Antananarivo renivohitra ireo jiro maro loko mandravaka andrin-jiro, zava-maniry sy fotodrafitrasa maro samihafa ka manome endrika kanto ny tanàna amin’ny alina.
Fiarovana ny tontolo iainana ao Atsinanana Hatao vaindohan-draharaha ny fambolen-kazo
Nohamafisin’ny fiadidiana ny Ministeran’ny tontolo iainana ao amin’ny faritra Atsinanana fa manao ho vaindohan-draharaha ny fiarovana ny tontolo iainana amin’ny fampiroboroboana ny fambolen-kazo ny minisitera mba ho famerenana an’ny Madagasikara ho rakotr’ala.
Fanondranana lamba Manomboka miarin-doha ireo orinasa eto Madagasikara
Efa manomboka miarin-doha tanteraka ny orinasa mamokatra lamba eto Madagasikara na dia teo aza ny fahapotehana noho ny fanonganam-panjakana nisy tamin’ny taona 2009.
Famarotan’olona Sinoa enin-dahy noraisim-potsiny teny Ivato
“Alaina vady no fomba atao mba hahamora ny fitondràna ireo andriambavilanitra Malagasy any Sina, fa rehefa tonga any dia zavatra hafa no mety hahazo azy ireo.” Araka ny vaovaon’ny polisim-pirenena
Fitondrana fatin-dehilahy tanaty taksi Olona 3 hiakatra fampanoavana anio
Telo no voasambotra hatreto mahakasika ny raharaha vono olona feno habibiana natao tao anaty sase plastika nentina fiara karetsaka, nampitangorona ny mponina teny Andavamamba. Anio no
Fisorohana ny loza sy fanafihana Nahitam-bokany ny hetsiky ny zandary tamin’ny lalam-pirenena
Nihena ny fanafihana fiara sy ny lozam-pifamoivoizana, nandritra ny faran’ny taona sy ny taom- baovao, raha mitaha tamin’ny taon-dasa. Io no tatitra vonjimaika nandritra ny tafa manokana